यी हु्न् एमाले जाेगाउन भन्दै संसद ‘बंक’ गरेर हिँडेका १० सांसद (नामावली)
July 18, 2021 N88LeaveaComment on यी हु्न् एमाले जाेगाउन भन्दै संसद ‘बंक’ गरेर हिँडेका १० सांसद (नामावली)
काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभामा अलि अनौठो दृश्य थियो । नेकपा एमालेका सांसदहरुको बेचैनी पनि । संस्थापन पक्षका नेताहरुलाई प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ लगायतका केही सांसद शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन जाँदैछन् भन्ने जानकारी आइसकेको थियो । तर उनीहरु रोक्ने पक्षमा उभिएनन् । उता माधव नेपाल पक्षमा झन् समस्या थियो । दिउँसै नेपाल निवास कोटेश्वरमा भीम […]
के प्रधानमन्त्री देउवा बाँकी डेढ वर्ष सुरक्षित छन् ?
July 18, 2021 N88LeaveaComment on के प्रधानमन्त्री देउवा बाँकी डेढ वर्ष सुरक्षित छन् ?
काठमाडाैं । गत असार २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त शेरबहादुर देउवाले आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। अब देउवा प्रतिनिधि सभाको बाँकी डेढ वर्षको अवधिसम्म सुरक्षित रहलान् त भन्ने प्रश्न भने यथावत छ। विश्वासको मतको पक्षमा १६५ र विपक्षमा ८३ सांसदले मत दिए भने एक जना सांसद तटस्थ रहे। नेपाली कांग्रेस, नेकपा […]
July 18, 2021 N88LeaveaComment on विश्वासको मत पाएलगत्तै मोदीले दिए देउवालाई बधाई
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मोदीले बधाई दिएका हुन् । सन्देशमा मोदीले देउवालाई सफल कार्यकालको बधाइ दिएका छन् । साथै सबै क्षेत्रमा सहकार्यका साथै जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने आशा व्यक्त गरेका छन् । Congratulations Prime Minister @DeubaSherbdr and […]
प्रधानमन्त्री देउवाले पाए विश्वासको मत, ओली देखिए झन् कमजाेर
July 18, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री देउवाले पाए विश्वासको मत, ओली देखिए झन् कमजाेर
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा टेकेर प्रधानमन्त्री बनेको एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । देउवाको पक्षमा १६५ मत परेको छ भने विपक्षमा ८३ मत मात्रै परेको छ । १ जना तटस्थ रहे । आइतबार राति भएको मतदानमा देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । सभामुख अग्नि […]
July 18, 2021 N88LeaveaComment on ओली समूहका चार सांसदले दिए देउवालाई विश्वासको मत
काठमाडौं । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर चार सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका छन् । सांसदहरु प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, गोपाल बम र धनबहादुर बुढाले देउवालाई मत दिएका हुन् । एमाले कार्यालय सचिवसमेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङले चार सांसदले देउवालाई मत दिएको पुष्टि गरेका छन् । याे पनि समाचार भीम […]
माधव नेपालले देउवालाई भोट दिने, को कोले नदिने ?
July 18, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपालले देउवालाई भोट दिने, को कोले नदिने ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका केही नेताले मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने भएका छन् । पार्टी एकता जोगाउन गठित कार्यदलका सदस्यसहित अन्य केही नेताहरुले विश्वासको मत नदिने भएका छन् । बानेश्वरमै भएको छलफलले सबैले देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिए । कार्यदलमा रहेका घनश्याम भुसाल, […]
रावललाई सांसदबाट राजीनामा दिन वाध्य पार्ने को हो ?
July 18, 2021 July 18, 2021 N88LeaveaComment on रावललाई सांसदबाट राजीनामा दिन वाध्य पार्ने को हो ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद चर्किँदै गर्दा उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्‍त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्‍वासको मत दिने कि नदिने विवादबीच आइतबार अपरान्ह उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। २०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा अछामबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका रावलले अनैतिक राजनीतिक खेलमा सहभागी नहुने भन्दै राजीनामा दिएका हुन्। ‘म यो अनैतिक राजनीतिको […]
आज संसदमा आज ओली आएको भए खुसी हुन्थेँ – देउवा
July 18, 2021 N88LeaveaComment on आज संसदमा आज ओली आएको भए खुसी हुन्थेँ – देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज प्रतिनिधि सभामा आएको भए आफू खुसी हुने बताएका छन्। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सधैं आफू बैठकमा आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले के ओली कारणले नआएको हो थाहा नभएको बताए। ‘उहाँ (ओली) बोल्दा म सधैं यहाँ आएको छु,’ देउवाले भने, ‘पहिले मनमोहन […]
ठाकुरले भने, ‘देउवा जनादेशबाट हैन परमादेशबाटै आएका प्रधानमन्त्री हुन्’
July 18, 2021 N88LeaveaComment on ठाकुरले भने, ‘देउवा जनादेशबाट हैन परमादेशबाटै आएका प्रधानमन्त्री हुन्’
काठमाडौं । जनता समाजवादीका अध्यक्ष महनत ठाकुरले प्रधानमनत्री सेरबहादुर देउवा जनमतबाट नभई परमादेशबाटै आएको बताउनुभएको छ । आज प्रतिनीधिसभामा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष ठाकुरले बर्तमान संविधानकै कारण देशमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘देउवा जीलाई हामी भोट त दिन्छौ तर उहाँ जनादेशबाट नभई परमादेशबाटै आएको प्रधानमन्त्री हो ।’उहाँले आफुहरुका माग पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवोधन गर्नुभएको […]
माधव नेपाल समूहका यी नेताले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने
July 18, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपाल समूहका यी नेताले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सबै नेताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने भएका छन् । पार्टी एकता जोगाउन गठित कार्यदलका सदस्यसहित अन्य केही नेताहरुले विश्वासको मत नदिने भएका छन् । बानेश्वरमै भएको छलफलले सबैले देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिए । कार्यदलमा रहेका घनश्याम भुसाल, गोकर्ण […]